Faa'iidooyin noocee ah ayaan arki doonaa haddii aan iibsado Lab ama Dhaddig Instagram Likes?
Dammaanad-bixinta ugu Yaraynta 85% ee Dumarka la xulay
Wuxuu Ka Helaa Cadaadiska Kacsan ee Macaamilkaaga
Ku dhiirrigeliya kuwa kale inay u ekaadaan oo jecel yihiin sawiradaada / fiidiyowyada
Adigu Ha Lahaa Inaad Leedahay Sawiro Kale
Natiijooyinka Ku bilow Saacadaha 24-72
Natiijooyinka wuu sii socon doonaa ilaa laga gaaro amarka
Turbo Media Marwalba Waxay Ku Bixineysaa Inta Badan Tahay Inaad Bixiso!
Ma inaan iibsadaa Man or Instagram jecel?
Maxaad u iibsataa lab ama dhadig Instagram jecel? Taasi waa jawaab fudud… waa qarsoodiga guusha Instagram! Hagaag, waan kaftamayaa Runtii maahan qarsoodiga guusha Instagram, laakiin waa bilow wanaagsan. Malaayiin qof oo barta Instagram ka iibsanaya ayaa jecel Instagram, oo ay ku jiraan kuwa caan ah, ganacsiyada, iyo dadka doonaya inay caan noqdaan. In kasta oo malaayiin dad ahi ay soo iibsadaan Instagram-ka jecel, haddana dad aad u tiro yar ayaa qirtay. Maxay u diidayaan? Marka maxaad u soo iibsaneysaa Instagram Lab ama Dumar jecel? Awoodda aad u leedahay inaad dooratid jinsiga dadka aad jeceshahay waxaad ka heli doontaa fursad aad ku hesho suuqa saxda ah ee aad iskudayeyso inaad soo jiidato Ma waxaad filanaysaa qurxiyo? Iibsashada dheddigga waxay jeceshahay oo keliya macno! Ma tababartaa ragga ciyaaraha fudud? Raggaaga ka hel rag aad u badan oo jecel boggagaaga si ay u muuqato! Si fudud ayaa loo yidhi, koraan kuwa raacsan oo waxaad ka helaysaa waxyaabo badan oo aad jeceshahay oo aad ku arki doontaa kuwa raacsan iyo kuwa jecelba waxay bilaabayaan inay si aad ah dhakhso ugu kordhaan adigoon u baahnayn inaad sii wadato iibsashada.
Goorma ayaan helayaa Instagram-ga?
Dhammaan amarradu waxay bilaabmaan 24-72 saacadood gudahood ka dib markii amarkaaga la dhigo. Xaaladaha badankood, tiradaada buuxda ee jeceshahay Instagram waxaa la keenaa saacado gudahood markii amarkaaga la dhigo, laakiin mararka qaarkood waxay qaadan kartaa maalin ama laba dheeraad ah, iyadoo kuxiran tirada aad amartay iyo inta posts ee aad rabto inaad dalbato. Waxaan si deg deg ah u gaarsiinnaa boggaga jecel Instagram-ka, marka waxaad ku heli doontaa hab ku habboon. Haddii aad rabto inaad Instagramkaaga jeceshahay in si xawli tartiib ah loo gaarsiiyo maalin kasta, dhammaan boostadaada si otomaatig ah, waa inaad tixgelisaa qorshayaashayada is-qoritaanka. Si aad u fiiriso iyaga, gal halkaan oo arag ikhtiyaaraadkaaga.
Miyaan heli karaa xisaabtaydu?
Gabi ahaanba maya! Waxaan ku bixinaa adeegyada Suuqgeynta Instagram habka ugu aaminka badan ee aan jebinayn sharci kasta oo leh Instagram. Isku mid uma odhan karno shabakadaha kale. Aad ayey muhiim u tahay inaad ka soo iibsato adeegyadan shirkad sumcad leh. Waxaan bixinay adeegyadan illaa iyo 2013 waxaana nahay khabiiro ku xeel dheer Warshadaha. Xusuusnow, inta badan wakhtiyada aad hesho waxaad ku bixisay, marka haddii aad aragto adeegyo raqiis ah waxaad u badan tahay inaad heli doonto waxyaabo aan aamin ku ahayn astaantaada.